Ukusuka kumanxeba wokupholisa amanxeba uya emithini yabantu: konke mayelana nokwelapha unyawo lwesifo sikashukela ekhaya > Izinkinga zesifo sikashukela
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ekhaya
Lokhu kugula kuqala kungabi nabungozi kakhulu - umlenze ungakhubazeka kancane, ikakhulukazi endaweni yonyawo, kuvela izilonda zesikhumba ezincane. Konke lokhu, yiqiniso, akunakushaywa indiva, kepha izinkomba azibalulekile kangako ukuthi isiguli sicabanga ukuthi ungalinda isikhashana ngokuvakasha kudokotela. Kwesinye isikhathi abantu bazama ukuphathwa bodwa, ngaphandle kokuphakamisa ngokuphelele ukuthi bakwenze kanjani kahle.
Njengoba sekushiwo, ukwelashwa ngonyawo sikashukela ekhaya akubekezeleli kahle. Imvamisa, ukwelashwa okuzimele kugcina ngokuqhubeka kwesifo kanye nesimo sesiguli siba sibi kakhulu. Ngokushesha lapho isiguli sifika kudokotela, kulapho amathuba okuba konke kuzokwenza ngaphandle kokuhlinzwa kokuhlinzwa. Ngokushesha lapho lesi sifo sitholwa, maningi amathuba okuba uzibophele ekwelashweni kwezokwelashwa.
Odokotela batusa ngokuqinile ukuthi uthintane nodokotela ohlinzayo noma nge-podologist ngezimpawu zokuqala zalesi sifo (ngisho nesincane kunazo zonke). Ukusuka esigulini ngokwakhe, ukuhlolwa konyawo nsuku zonke nangokuphelele kuyadingeka, uma kulimala kuyadingeka ukubanakekela ngokucophelela nangokujwayelekile.
Ukwelashwa okulondoloziwe konyawo lwesifo sikashukela kususelwa kumithi elwa namagciwane, izidakamizwa ezinciphisa ushukela, ama-painkillers, ama-angioprotectors, ama-antiseptics kanye nemithi ye-antibacterial.
Ukungenelela kokuhlinzwa kungaba ngale ndlela elandelayo:
ukuhlinzwa kwe-artery bypass - kulokhu, ukugeleza kwegazi elisha kubekwe, kudlula lapho kunenkinga khona,
i-angioplasty - i-lumen ye-arterial ibuyiselwe ukubuyisela ukuhamba kwegazi,
i-endarterectomy - kulokhu, imithambo enesifo iyasuswa, nokuhamba kwegazi kudluliselwe kwabanye,
ukuqina - kulokhu kuhlanganiswa, ukwandisa ifreyimu kufakwa ezindongeni zemikhumbi ethintekile.
Eqinisweni, ukwelashwa konyawo lwesifo sikashukela ekhaya kungenzeka, into esemqoka ukusondela kulolu daba ngokuhlelekile nangehloso. Ungayelapha kanjani unyawo lwesifo sikashukela ngemithi yabantu, udokotela wephrofayili uzochaza. Kepha kufanele uqonde ukuthi izindlela ezindala zingasetshenziswa kuphela njengezinyathelo ezengeziwe zokwelashwa.
Unyawo lwesifo sikashukela luqedwa yile makhambi esintu alandelayo:
Unyawo lwesifo sikashukela - lesi sifo sibucayi kakhulu, uma ungasiphathi futhi unganaki izeluleko nemiyalo kadokotela, ungalahlekelwa umlenze wakho, futhi ngokuzayo, ngisho nokuphila.
Ukusuka kumanxeba wokupholisa amanxeba uya emithini yabantu: konke mayelana nokwelapha unyawo lwesifo sikashukela ekhaya
Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukuphulukiswa kwamanxeba nezilonda zomlenze kuthatha isikhathi eside; kunengozi enkulu yokutheleleka. Amagciwane angabangela i-gangrene.
Kulokhu, ukunqunywa kwengalo kwenziwa. Le nkinga kwezokwelapha ibizwa ngokuthi yisifo sikashukela sikashukela. Kufanele kunqunywe ngudokotela wobuchopho noma udokotela ohlinzayo.
Mhlawumbe ukwelashwa konyawo lwesifo sikashukela ekhaya.
Ungalapha kanjani unyawo lwesifo sikashukela ekhaya?
Isifo sikashukela sonyawo sikashukela senzeka ngenxa yokuphazamiseka kwe-trophic, ukutholakala kwegazi okujwayelekile.
Lesi sifo sizibonakalisa ngezimpawu ezilandelayo:
ukwakhiwa kwamabele, amabele ezintanjeni,
ukubonakala kwezindawo ezinobuhlakani nokuhlanzeka, izilonda ezincane ezijulile,
Ubuhlungu, ukushisa, ukukhubazeka kwemilenze,
blanching ye-epidermis yemilenze, ukubonakala kwamabala ansundu.
Unyawo lwesifo sikashukela luvela kancane kancane. Izimpawu zokuqala zenzeka eminyakeni engama-18-20 ngemuva kokuqalwa kwe-endocrinological pathology. Uma isiguli singalawuli ushukela, lapho-ke i-syndrome ingahle ibe khona ngaphambili.
Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela kufanele kwenzeke kulezi zindawo ezilandelayo:
ukugcina ushukela usezingeni elifanele,
kulayisha indawo ethintekile lapho uhamba,
ukuthatha ama-antibacterial, anti-inflammatory, agents abaphulukisa amanxeba,
ukuhlolwa kwezinyawo zansuku zonke
ukunakekelwa kwemilenze efanelekile.
Ezinye zalezi zinyathelo zenziwa esibhedlela ezikhungweni zezokwelapha.
Ukwelashwa okukhulu kufanele kube sekhaya. Umsebenzi oyinhloko wesifo sikashukela ukubuyisela izinga le-glycemia kubuyisakale futhi ligcine lingaphansi kwemingcele eyamukelekayo. Lokhu kungenzeka ngokusungula umsoco, ukuhola indlela efanele yokuphila.
Ukuzilolonga kungasiza nokuqeda isifo sikashukela sonyawo. Inqubo ihlose ukuvikela ukuqhubeka kwesifo. Kwenziwa ekuqaleni kwe-pathology, lapho kungakabikho zilonda ezibonakalayo esikhunjeni.
Ukuzilolonga kwenziwa ngale ndlela elandelayo:
geza izinyawo zakho ngensipho emanzini afudumele,
thatha isimo esihle sokwenza imithambo engezansi,
faka i-talcum powder, ukhilimu onamafutha noma i-powder entendeni yesandla sakho. Lokhu kuzosiza i-glide edingekayo futhi kuvikele ukulimala ngengozi,
Ukuhlanza kufanele kuqala ngamathiphu weminwe. Ukunyakaza kuqondile ekuqaleni, bese kuyindilinga (kubheke emaqakaleni). Kuhle ukusebenza ngezikhala ezihlukanayo,
iminwe yokuqala iyagoqwa, bese kuthi emuva, okungaphezulu konyawo, isithende, umlenze ophansi. Isithende kumele sithinteke ngamadolo.
Kubalulekile ukuthi ukwelashwa ngonyawo sikashukela kube okubanzi.
Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela ngezindlela zabantu: umbono wesazi
I-Endocrinologists kanye ne-podiatrists ngamabomu bakholelwa ukuthi ukwelashwa okuhlukile konyawo lwesifo sikashukela akunakwenzeka kuphela, kodwa futhi kusebenza kakhulu.
Kodwa-ke, iziguli ezifuna ukusebenzisa amakhambi abantu ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela kudingeka sazi okulandelayo:
1. Ukwelashwa kwe-SDS akuyona indawo yokusekela imithi ethethwe ngudokotela ukwenza ushukela wegazi ube ngokwejwayelekile. Akunandaba ukuthi izindlela zabantu ziletha kahle kangakanani, awukwazi ukuyeka ukuthatha amakhemisi anqunyelwe emithi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanohlobo lwe-insulin oluza isifo.
2. Unyawo lwesifo sikashukela ekhaya lungalapheka kuphela ezigabeni zokuqala zesifo! Ungazisusa ngokuzimela izimpawu ezinje ze-SDS ezinjengokuthi: amabele, izindawo ezi-keratinized, izilonda ze-trophic ngaphandle kokutheleleka, ukutheleleka nge-fungus ekuqaleni kwesigaba, kanye nokwelapha ukuhlukunyezwa, amanxeba, ukusikeka nezindawo zokujova.
Umbono kadokotela umbono: "Amakhambi we-folks onyawo lwesifo sikashukela asuselwa ekusetshenzisweni kwezitshalo zokwelapha ezine-antiseptic, ukuphulukisa amanxeba, umphumela wokulwa nokuvuvukala. Kungakho amakhambi abantu esebenza kahle uma izinqubo zenziwa ngendlela efanele. Umuthi wendabuko ubheka izindlela ezinjengokuvikela ukukhula konyawo lwesifo sikashukela nokungezelela inkambo yokwelashwa eyinhloko. "
Unyawo lwesifo sikashukela - ukwelashwa kwasekhaya ngama-lotions
Ithuluzi elisebenzayo lokususa ama-calluses nezilonda ebusweni besikhumba sezinyawo - ama-lotions. I-lotion yenziwa kanjena: ingxube yezokwelapha ibekwa lapho igqokwa nge-gauze bese ifakwa endaweni ethintekile yomlenze amahora angama-1-6.
Njengengxube yokwelashwa, ungasebenzisa:
Ubisi oluncibilikisiwe noma ukhilimu omuncu.
Uju + lwe-aspirin + lwamaqabunga e-burdock ochotshoziwe.
Ubumba oluhlaza + i-hydrogen peroxide.
Ukunaka! Uma kukhona ukutheleleka ngefungal esikhunjeni sezinyawo, ama-lotion awakwazi ukusetshenziselwa ukwelapha ukulimala!
Ungalapha kanjani unyawo lwesifo sikashukela nge-massage?
Ukuzilolonga nokusebenzisa amafutha abalulekile anomphumela we-antiseptic kunomthelela omuhle esimweni sesikhumba futhi kusiza ukuguquguquka kwegazi ngokwejwayelekile emikhawulweni ephansi.
Ukuzivocavoca kungenziwa ngokuzimela, kugcina le mithetho elandelayo:
ngaphambi kwenqubo, udinga ukugeza futhi womise imilenze yakho ngaphandle kokuzithambisa,
fudumeza uwoyela we-massage ngokuwubamba ngesandla sakho imizuzu engu-3-5,
faka uwoyela ezintendeni zezandla bese uthambisa imilenze yakho ngobumnene,
indlela yokuhamba - ukusuka ezinzwaneni kuya emilenzeni,
ngemuva kwenqubo, isikhumba kumele sithothiswe ngo-ayisikhilimu, kungakuhle ukuthi sisebenzise uwoyela okhethekile kwabanesifo sikashukela.
Ukuzivocavoca kukhonjiswa ikakhulukazi kulabo bantu abanemilenze evuvukala ngesifo sikashukela, ukuqina, ukuqina nokukindla. Lezi zimpawu zibonisa ukuqala kwe-ischemic VDS.
Njenge-moisturizer ngemuva kokugcotshwa, kunconywa ukusebenzisa okhilimu abaqukethe urea - umswakama wemvelo namavithamini. Ukwakheka okunjalo kunokhilimu abanesifo sikashukela sochungechunge lwe-DiaDerm. Ngemuva kokufaka nokuthatha ukhilimu, kunconywa ukugqoka amasokisi kakotini.
Chofoza esithombeni esingezansi ukuthola kabanzi ngama-okhilimu eshukela sikashukela bese uwa-oda ukulethwa ekhaya noma ngeposi.
Ukunaka! Musa ukusigcoba isikhumba sezinyawo usebenzisa uwoyela we-massage lapho kukhona ukuvuvukala okuthelelekile, izilonda, amanxeba avulekile.
I-Diabetesic unyawo: izindlela zokwelapha zasekhaya ezinama-insoles we-orthopedic
Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela ngemithi yesintu kusebenza kakhulu lapho kuhlanganiswa nokugqoka izicathulo ezifanele. Imvamisa umuntu uyakwazi ukuphatha ngcono isimo sezinyawo, aqede izilonda namakholi, nezicubu ezingazweli noma ezingezinhle ziholela ekwakhiweni kwezilonda ezintsha emahoreni ambalwa nje.
Izicucu kufanele zenziwe ngezinto ezisezingeni, zingabi nemisipha eminyene. Ubukhulu kufanele buhambisane nse nonyawo.
Ama-insoles akhethwe kahle abaluleke kakhulu. Kubantu abane-SDS, kubalulekile ukuthulula imilenze futhi usabalalise ngokulinganayo umthwalo, kanye nokuthambisa amagagasi okuthuthumela okwenzeka lapho uhamba futhi uthinta ukugoba konyawo nesithende.
Ama-insoles aphezulu we-orthopedic wesifo sikashukela azosiza hhayi ukusabalalisa ngokulinganayo umthwalo emilenzeni, kepha futhi anikele ngesikhundla sabo semvelo ezicathulweni, okusiza ukugwema ukuguqulwa kwamalunga, ummbila kanye nezimbila.
Ngokusebenzisa njalo ukulayisha ama-insoles ahlangana nezinye izindlela, ungafinyelela imiphumela emihle kakhulu futhi uvikele ukukhula kwesifo.
Chofoza esithombeni esingezansi ukuze ufunde kabanzi ngama-insoles kashukela bese uwa-oda ukulethwa ekhaya noma ngeposi.
Izinzuzo zokusebenzisa insoles yesifo sikashukela:
ukuncipha kobuhlungu ngenkathi uhamba,
vimbela ukushushuluza izingcingo,
ukusatshalaliswa okufanayo kwemiphumela yesisindo somzimba emilenzeni,
Ukuvinjwa kokuqina kwegazi emilenzeni,
isikhundla esifanele sonyawo ngaphakathi esicathulweni.
Ungayikhetha kanjani indlela yokwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela?
Lapho ukhetha indlela yokwelapha isifo sikashukela sikashukela (izimpawu nokwelashwa ngamakhambi abantu kufanele kuhambisane futhi kungabi nokuphikisana), isimo samanje kufanele sibhekwe:
phambi kwamabele omile, ukoma okomile, izinhlayiya ze-keratinized, izilonda ezincane, kunconywa ukusebenzisa amabhathi okugeza ngezinyawo nge-decoction yamakhambi,
izilonda ezijulile, ummbila omanzi, ukuvuvukala kuphathwa nge-lotions,
njengezindlela zokuvimbela, kuyadingeka ukwenza ukunakekelwa okufanele konyawo lwesifo sikashukela, ukusebenzisa ama-insoles wethambo, ukwenza umthambo.
Kufanele ngimbone nini udokotela ngokushesha? Ebusweni bezimpawu ezilandelayo:
izinhlungu ezibukhali emilenzeni,
ukuvela "kwezinkanyezi" ezinemithambo, imithambo evuvukala,
ushintsho ekwakhekeni nombala wesikhumba semilenze,
mnyama kwesikhumba sezinyawo,
izilonda ze-purulent, ukuvuvukala, imichilo yemvelaphi engaziwa.
Kubalulekile! Uma ukwelashwa ngezindlela ezihlukile kungalethi umphumela omuhle phakathi kwamaviki angama-2-3, khona-ke kuyodingeka ukuthi ubone udokotela ukuze akwenze ukuxilonga okulungile futhi akunikeze nemithi.
Isitolo sethu esiku-inthanethi siqukethe amakhambi ezisebenza kahle futhi anamuhla wesifo sikashukela. Siletha lonke iRussia nge-imeyili ekhaya lakho, kumaphoyinti wokulethwa kwemiyalo nangeposi. Chofoza esithombeni esingezansi bese uthola okunye.
Izindlela zokwelapha unyawo lwesifo sikashukela ziphakamisa ukusetshenziswa kwalezi zindawo ezilandelayo:
ukusetshenziswa kwemithi ye-antibacterial and antiseptic,
umjovo we-alpha lipoic acid,
ukusetshenziswa kwezidakamizwa zokwelapha amanxeba,
ukuthathwa kwamavithamini eqembu B.
Ungafaka isicelo njengenye yalezi zindawo, nobunzima.
Imithi yokuphola ebanzi
Amalungiselelo wokuphola obanzi amisa inqubo yokuvuvukala, avuselele ukuvuselelwa kwezicubu. Kaningi, ama-endocrinologists anquma i-panthenol kwabanesifo sikashukela.
Lo muthi uyatholakala ngesimo sokugcoba noma Foam lesikhumba. Isithako saso esisebenzayo yi-dexpanthenol. Into esetshenziswayo - i-allantoin - ithuthukisa ukusebenza komuthi.
Umuthi lo unempahla yokungezwani, yokulwa nokuvuvukala nokubulala izinzwa, okwenzelwa ukuntuleka kwe-panthenothenic acid emzimbeni. Isetshenziselwa izimpawu ze-dermopathy yesifo sikashukela.
Ukungena esikhunjeni, umkhiqizo usheshe uguqukele esimweni esisebenzayo se-vithamini B5. Le nto ilawula izinqubo ze-metabolic emzimbeni womuntu.
Amafutha eLevomekol nawo anomphumela wokupholisa amanxeba. Kubandakanya i-chloramphenicol ye-antibiotic, isisusa sokuvuselela izicubu ze-dioxomethyltetrahydropyrimidine. Lezi zingxenye zibonakaliswa yi-anti-inflammatory, dehydrating, antimicrobial.
I-Levomekol futhi iqukethe i-methyluracil, ekhuthaza ukwakheka kwama-leukocytes, i-interferon. Umuthi wokugcina unemiphumela yokuthambisa kanye yokuvimbela amandla. Futhi, i-dioxisole isetshenziselwa ukuphulukisa.
Ukwelashwa kwezilonda ezikhuluphayo:
Delaxin. Iyoma, iqeda ukumiswa nokuvuvukala, isheshise ukuvuselelwa kwezicubu,
I-Vulnostimulin. Umuthi ungokwemvelo ngokuphelele.
I-Solcoseryl. Kusheshisa ukwelashwa ngokuvuselela izinqubo ze-metabolic.
Ukwelapha amanxeba okuhlanza, faka lokhu:
U-Ichthyol wamafutha. Ukhipha ukhunta, abulale amagciwane futhi akhulule izinhlungu,
Amafutha eVishnevsky. Isetshenziselwe ama-lotions noxinzelelo,
Isithambiso se-Streptocide. Idonsa uketshezi olunonya, lubulala amagciwane.
Phatha amanxeba okugcoba amahlandla amaningana ngosuku kuze kube yilapho uselaphe ngokuphelele.
Ama-antiseptic kanye nama-antibacterial agents
Imithi ye-antibacterial ne-antiseptic esetshenziselwa unyawo lwesifo sikashukela ihlala inezi zithako ezisebenzayo ezilandelayo:
Aminitrozole. Isebenzayo ngokumelene ne-staphylococci, i-streptococci, iTrichomonas neGiardia. IPseudomonas aeruginosa neProteus bamelana naleli gciwane,
I-Chloramphenicol. Ibulala ama-spirochetes, ama-staphylococci, ama-streptococci kanye nama-pathojeni angamelana nama-sulfonamides nama-penicillin,
I-Bacitracin. Isebenza ngokumelene namagciwane amaningi anempilo enhle,
ISulfonamide. Inomphumela olimazayo ku-streptococci, Escherichia coli, Klebsiella, staphylococci, chlamydia,
Neomycin. Iphelisa i-streptococci, i-staphylococci, i-bacillus yedys, i-enterococci, i-salmonella.
Imithi yesifo sikashukela yonyawo lwe-sikashukela kanye ne-antiseptic ingafaka isithako esisodwa noma ngaphezulu esisebenzayo. Inhlanganisela ye-sulfonamide nento ye-antiprotozoal yethulwe ku-orenji ye-Syntomycin. I-Bacitracin ne-neomycin ziku-Baneocin.
I-Alpha lipoic acid itholakala kumaseli womzimba womuntu. Inezakhiwo ze-antioxidant, yehlisa ukubukeka kwegazi, ivimbela izilonda ze-vascular. Iphinde ibe nemiphumela ye-immunomodulatory, anti-inflammatory kanye ne-radioprotective.
Ngokushoda kwe-alpha-lipoic acid, kunikezwa izidakamizwa ezilandelayo:
Amavithamini B6 ne-B12 avimbela ukwephulwa emicimbini yezinzwa, amaseli abonwa ku-mellitus yesifo sikashukela.Futhi, lezi zinto ziqinisa amasosha omzimba, zivuselela umzimba ukuba ululame futhi ulwe nesi sifo ngokwaso.
Vitamin kanye ne-mineral complex Alphabet Diabetes
Amavithamini e-B awangenwa kahle ngesikhathi sokwelashwa ngamathebhulethi anciphisa ushukela, kepha adingekayo kakhulu ukufakwa kwe-insulin nokubuyiselwa kokudla kwe-carbohydrate metabolism.
Ungasebenzisa imijovo yalezi zinto noma uthathe amaphilisi, ahlanganisa i-B6 ne-B12. Amakhemisi edolobha athengisa i-Alphabet, i-Doppelherz Asset, iComplivit, namavithamini akhethekile abanesifo sikashukela.
Imvamisa, unyawo lwesifo sikashukela aluphathwa ngamakhambi abantu. Kodwa izindlela zokupheka zomuthi ohlukile zingasetshenziswa njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi, okwandisa ukusebenza kahle kokwelashwa.
Imigomo yokusebenzisa ama-tinctures okuphulukisa kanye nama-decoctions ekhaya:
ukusetshenziswa kwasendaweni kwama-ejenti okwelapha amanxeba avele ngesikhathi senqubo ye-purulent-necrotic,
Ukukhetha kwezimali zokwelashwa ezikhipha imithambo yegazi futhi kunciphise ukuvuvukala,
ukusetshenziswa kwemikhiqizo ethuthukisa i-microcirculation kanye nokunciphisa iplasma.
Lesi sitshalo sekuyisikhathi eside sibaluleka ngenxa yezimpawu zaso zokulwa nokuvuvukala nezilonda. Ijusi leqabunga elisha linikeza umphumela onamandla wokubulala izinhlungu.
I-burdock kufanele igezwe futhi iboshwe ngommese kuze kuqhamuke ujusi.
Namathisela isitshalo enxebeni bese ubopha isigaxa ngebhandeji. Shiya ubusuku bonke.
Amakhefu anamandla okwenza ngcono ukuhamba kwegazi, aphathe izilonda. Sebenzisa uwoyela we-clove. Kusetshenziselwa i-gauze futhi kufakwe endaweni ethintekile.
Kunconywa futhi ukuthatha umuthi ngaphakathi kwamaconsi ambalwa ngaphambi kokudla. Amafutha e-Clove nawo afakwa emafutheni asuka ezinalwaneni ezintsha.
Ukuze wenze lokhu, isipuni sezinaliti sidinga ukuchobozekwa bese sengeza amaconsi ambalwa kawoyela we-clove. Faka bese unamathisela enxebeni. Umuthi onjalo ususa ukulunywa nobuhlungu.
Imikhiqizo yobisi oluhlaza
Kuthathwa ngomlomo futhi ama-compress enziwa ngokufana.
Ukuphathwa okunjalo kuhlanza umzimba, kugcizelele umfutho wegazi, kuqinisa amasosha omzimba. Ukwakha i-compress kusuka ku-yoghur, moisten ucezu lwe-gauze emkhiqizweni bese uluxhuma endaweni ethintekile, uyilungisa ngebhandeji.
Ukwengeza ukusebenza kwesiphuzo sobisi obilisiwe esixutshwe nesinkwa rye. Ukwakheka okunjalo kusetshenziselwa ezinyaweni ebusuku.
Ingabe imilenze ingalashwa ngesifo sikashukela ngokuphelele?
Ukwelashwa okugcwele kwe-onyawo kwisifo sikashukela kungenzeka kuphela uma i-gangrene ingakakhuli. Ukwelashwa akulula, isikhathi eside.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukugcina ushukela ebangeni le-4-5,5 mmol / l, ulandele ekudleni, wenze umunyu, sebenzisa izidakamizwa zasekhemisi nezinye izindlela zokupheka. Udokotela we-endocrinologist kufanele aqaphe ukusebenza kwezokwelapha.
Ekwelashweni konyawo lwesifo sikashukela ekhaya ngemithi yabantu kule vidiyo:
Ngakho-ke, ukwelapha unyawo lwesifo sikashukela ekhaya kuyinqubo ende. Ukuthola umphumela ophumelelayo, kubalulekile ukulandela izincomo zikadokotela, ulondoloze amazinga eglucose ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, nakekela imilenze yakho futhi wenze i-massage.
Unyawo lwesifo sikashukela - kuyini? Kungenzeka yini ukwelapha ekhaya?
Uma isiguli sitholwa sinonyawo lwesifo sikashukela, ukwelashwa ekhaya kungenziwa kuphela ngemuva kokubonana nodokotela. Ukuzilapha nokwazi ukuxhumana nomuntu onguchwepheshe kungavusa ukubonakala kwezilonda, i-necrosis, ukucekelwa phansi kwezicubu, okuholela ekunqunyweni konyawo nokukhubazeka kweziguli.
Izimbangela zokubonakala konyawo lwesifo sikashukela
Isifo sikashukela sonyawo lwesifo sikashukela esintwini senza ukuthi kukhiqizwe insulin enganele, enikeza ushukela kumaseli nezicubu ezivela egazini elijwayelekile. Inani lakhona elinganele liholela ekuphazamisekeni kwegazi nokulimazeleka kokuphela kwemicu yezinzwa. I-Ischemia iyakhula, okugcina kuholele ekubonakaleni kwezilonda eziyizidudla esigulini ngentuthuko eyalandela ye-gangrene.
Esikhathini sikashukela i-mellitus, imifantu encane, ukonakala, amanxeba kanye nommbila emlenzeni, ngenxa yokungalingani kwegazi eliphelele, kubuye kube yizilonda. Ama-bacterium we-patathogenic angena kuwo, avuse izinqubo zokuvuvukala kanye nokutheleleka.
Amanxeba ama-purroc avela ukuthi empeleni awapholi. Ezimweni ezingama-70%, lokhu kuholela ekunqanyweni. Lokhu kungenxa yezici zonyawo lwesifo sikashukela. Izici ezivusa lesi sifo yilezi:
Ukugeleza kwegazi okulimazayo
Izicishi ezingashisi ezandisa ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi,
Ukukhula kwezilonda eziseduze nesifo sikashukela, okuthi, njengoba lesi sifo sikhula, kuthinta izicubu zomzimba nezithambo,
I-Atherosulinosis yemikhumbi emikhulu,
Ukulimala emithanjeni yomlenze ophansi.
Izimpawu zonyawo lwesifo sikashukela
Esigabeni sokuqala sesi sifo, ukuncipha kokuzwela endaweni yonyawo kuyinto ethile. Isifo sikashukela siyeka ukuzizwa umlenze lapho unyakaza, khona-ke alizwa ukushintshwa kwezinga lokushisa, izinhlungu kanye nomphumela omubi. Njengoba lesi sifo siqhubeka, kuboniswa lezi zimpawu ezilandelayo:
Umlenze onesifo uqala ukuvuvukala
I-Thermoregulation endaweni yonyawo iyaphazamiseka,
Ukukhathala kwemilenze ngesikhathi sokuhamba kuyabonakala,
Isiguli siqala ukuzizwa sidangele, ubusika, ukushisa,
Kunobuhlungu emilenzeni engezansi lapho unyakaza futhi ebusuku uphumule,
Umbala wesikhumba uba cyanotic, pale noma obomvu,
Kukhona ukuvela kwezipikili,
Ngenxa yokuthuthuka kokutheleleka nesikhunta, bashintsha umbala wabo,
Amanxeba, ukubiza kanye nokuklwebeka okuncane kuphole isikhathi eside: kuze kube izinyanga ezi-1-2,
Ngemuva kokuphiliswa kwamanxeba esikhunjeni semilenzi kukhona iminonjana
Izikhumba ezincanyana ezizungeze izilonda,
Noma ngabe welashwa kanjani, izilonda aziphili isikhathi eside,
Ukuvela kwezilonda esikhaleni sezithandani,
Izipikili ziqala ukukhula, zibangele usizi nokuwohloka kwezicubu,
Izinkozo ziwohloka zizilonda,
Ukuvimbela ukuthuthukiswa konyawo lwesifo sikashukela, udinga ukuvakashela udokotela okungenani kanye ngonyaka. Uzonikeza izincomo zokuthi ungalapha kanjani unyawo lwesifo sikashukela nokuthi ungaziphatha kanjani izinyawo kahle.
Izimpawu, ukudla kanye nokwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2
Unyawo lwesifo sikashukela lufanelekela izinhlobo ezintathu:
I-Neuropathicokukhona kuyo imicu yama-nerve fibers,
I-Ischemiclapho, ngenxa yokuphazamiseka kokujikeleza, kuguqulwa izinguquko zethambo kwezicubu,
Kuhlanganisiwelapho kunezimpawu ze-neuropathic ne-ischemic diabetesic onyawo.
Ifomu ngalinye linezimpawu zalo ezithile.
I-Neuropathic ifomu linezimpawu ezilandelayo:
Ukungabikho koshintsho kumbala wesikhumba,
Ukuzwela konyawo kuncishisiwe,
Kunokuqina ngendlela yamabele,
Ukuba khona kwezilonda ezimanzi,
I-Ischemic ifomu linezimpawu ezilandelayo:
Ukuzwela kuyinto ejwayelekile
Kukhona izilonda zokulimala ebusweni,
Isifo sikashukela sisezinhlungwini
Isikhumba sonyawo sinombala onsundu,
Izinyawo zibanda ngokuthinta
Ukushaya kwenhliziyo akuzwakali.
Ifomu elihlanganisiwe libonakala ngezimpawu zezigaba ze-ischemic ne-neuropathic.
Lezi zigaba ezilandelayo zimpawu zokukhulisa unyawo lwesifo sikashukela:
Okokuqala, lapho isikhumba somile, imilenze ihlala ikindiki, iminwe ikhubazekile. Kulesi sigaba, lesi sifo selashwa ngempumelelo,
Esokuqala, lapho kubukeka khona izilonda kubhekwa. Kulesi sigaba, umuthi uyasiza,
Okwesibili, lapho ukutheleleka kuhlangana nezilonda, okudala ukuthuthukiswa kwamanxeba okuhlanza,
Okwesithathu, lapho ukukhula kwezilonda esikhumbeni nezicubu kwenzeka,
Okwesine nokwesihlanu kubonakaliswa ubukhona be-necrosis. Akunakwenzeka ukuqeda i-necrosis usebenzisa izidakamizwa. Ngalezi zigaba, ukunqunywa konyawo kubhekiselwe kulo.
Ukuxilongwa konyawo lwesifo sikashukela
Kunezinqubo eziningana zokuxilonga ezizothola ngokushesha ukuthuthukiswa konyawo lwesifo sikashukela.
I-X-ray, ezokuvumela ukuthi utadishe izicubu zomlenze futhi ukhombe izimpawu zokuqala zokukhula kwe-gangrene.
Ukuhlaziywa kokuba khona kokutheleleka emzimbeni.
I-angiogram lapho kuthola khona ukuphazamiseka kokujikeleza emilenzeni.
Lesi sifo asidingi ukwelashwa kuphela, kodwa futhi nezinyathelo ezithile zokususa izimbangela zentuthuko yaso kanye nokuvinjwa kwezinqubo ze-pathological. Umuntu onesifo sikashukela kufanele alandele le mihlahlandlela:
Thatha isivivinyo sikashukela segazi njalo
Fudumeza izinyawo zakho ngenkathi ebandayo,
Gqoka izicathulo ezintofontofo,
Musa ukufudumeza izinyawo zakho eduze kwemithombo yokushisa.
Khipha ngokuphelele ukuhamba ngezinyawo ezingenazo izicathulo,
Ukuze uthole amanxeba, sebenzisa ibhandishi kuphela,
Ukubulala amagciwane izilonda nezilonda, i-hydrogen peroxide ne-iodine azikwazi ukusetshenziswa.
Ukwelashwa kwalesi sifo ngezidakamizwa kwenziwa kuphela ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela. Umkhuhlane lapho ukhona ushukela, isiguli kumele siphuze i-insulin.
Uma isigaba sesifo sesiqaliwe, isiguli selashwa ngale mithi elandelayo:
I-Ciprofloxacin Erythromycin Metronidazole
Lawa ngama-antibhayothiki azobhubhisa izifo namagciwane.
Ama-antiseptics alandelayo aboniswa ekwelapheni amanxeba:
Ngemuva kokubulala amagciwane, ukwelashwa kwezilonda ngezidakamizwa ezifana:
Ukufakwa okungasebenzi amandla kufakwa ezinyaweni nasemlenzeni ophansi ukuze kudambiswe ukucindezela emlenzeni.
Iziguli eziningi zizibuza ukuthi lesi sifo singalapheka yini ngosizo lwezindlela zemithi yendabuko.
Ukwelashwa ngemishanguzo yabantu kufanele kwenziwe kuphela ngemvume kadokotela. Lezi zindlela zingaselapha lesi sifo ekuqaleni kwentuthuko.
Isipuni samajikijolo amajikijolo senziwa kabusha ngamanzi abilayo, afakwa imizuzu engama-20 sihlungiwe. Ngiphatha izilonda kanye nokulimala kaningana ngosuku.
Hlanganisa isipuni esingu-1 sotshani baseSt. Thela i-200 g yamanzi bese ibila imizuzu eyi-10. Ama-Lotions enza ikhambi elifudumele.
Leli ikhambi labantu elisebenzayo, elinomphumela wokulwa nokuvuvukala nezilonda. Ukuze uyilungiselele, amathisipuni ama-2 eucalyptus athululelwa ngamanzi abilayo, afaka ihora bese elicwengekile. Ngicubungula izilonda.
Amathampu afakwe ku-clove oil angasebenza ezindaweni ezithintekile.
Usebenzisa la mathuluzi, unganakekela izinyawo zakho ekhaya. Kubalulekile ukulandela ngokuqinile izincomo ukuze uvimbele ubunzima besifo. Imvamisa, lezi zindlela zisetshenziswa njengezindlela zokwelapha ezingeziwe noma ukuhlela inqubo ngokwezifiso ekugxileni kwezilonda emilenzeni.
Ithuluzi elisebenzayo lokususa ama-calluses nezilonda ebusweni besikhumba sezinyawo - ama-lotions. I-lotion yenziwa kanjena: ingxube yezokwelapha ibekwa lapho igqokwa nge-gauze bese ifakwa endaweni ethintekile yomlenze amahora angama-1-6. Njengengxube yokwelashwa, ungasebenzisa:
Unyawo lwesifo sikashukela: ukwelashwa ekhaya ngezidakamizwa kanye namafutha okugcoba
Isifo sikashukela sonyawo siyinkimbinkimbi yezinguquko ze-pathological ezicutshini zemilenze. Izandla ziyahlupheka ngenxa yokuxineka okukhulu koshukela egazini. Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela kuya ngokuthi ukuhlangana kwezenzo nodokotela wamathambo, i-endocrinologist nabanye odokotela abakhethekile.
Isifo sikashukela siyisifo esingelapheki esihambisana nezinkinga eziningi. Isifo sikashukela sonyawo singenye yazo. I-Pathology ivame ukuholela ekwakhiweni kwezinqubo ze-necrotic, gangrene kanye nokuqunjelwa.
Cishe i-85% yamacala angama-thumba, i-osteomyelitis, i-phlegmon, isifo samathambo esihlanzekile, ne-tendovaginitis. Lokhu kufaka phakathi isifo sikashukela se-osteoarthropathy.
Izimbangela zeSifo Sikashukela Sikashukela
Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukukhiqizwa okunganele kwe-insulin ye-hormone kwenzeka. Umsebenzi obalulekile we-hormone ukuletha ushukela kumaseli womzimba. Ngakho-ke, ukukhiqizwa okunganele kwe-insulin yisizathu sokwanda koshukela egazini. Ezimweni ezimbi kakhulu, ukusakazeka okujwayelekile kuyawohloka.
Kumuntu onesifo sikashukela, amanxeba asendaweni yonyawo aphulukiswa kancane. Izithende ezinesifo sikashukela i-mellitus ziba ngokunganaki. Ngemuva kwesikhashana esithile, lokhu kuholela ekwakhekeni kwezilonda eziyizithuku, okuthi, uma ziphathwe ngendlela engafanele noma ngokungafanele, ziguqulwe zibe yi-gangrene.
Ngisho namanxeba amancane nokuqunjelwa okuncane kungaholela esifweni esinjalo. Ngenxa yokuhlinzekwa kwegazi okunganele, ukuzwela kuyalahleka, ngakho umuntu akazizwa ebuhlungu ngenxa yokulimala. Izilonda ezivele kuleli cala azibonwa yisifo sikashukela isikhathi eside.
Akukona njalo ukwelapha i-pathology, ngakho-ke, umlenze kufanele unqunywe. Kumele kwaziwe ukuthi izilonda ziyavela kulezo zindawo ezinomthwalo lapho uhamba. Ukuqhuma okubangelwa kuba - indawo enhle yokungena nokuthuthukiswa kwamagciwane. Ngakho-ke, kubantu abanesifo sikashukela, amanxeba e-purulent avele angathinti kuphela izingqimba zesikhumba esiyingqayizivele, kodwa futhi namathambo namathambo.
Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela ekhaya, futhi ngosizo lomuthi wendabuko, esimweni esinjalo kuletha umphumela omncane. Odokotela banquma ukunqamula imilenze.
Izimbangela eziphambili zokuthuthuka konyawo lwesifo sikashukela ziyaqashelwa:
ukuncipha kokuzwela kwemikhawulo engezansi,
ukuphazamiseka kokugeleza kwegazi emithanjeni nakuma-capillaries,
izingqimba zesikhumba esomile.
Kwisigaba sokuqala sesithende, onesifo sikashukela akabukeki uguqulwe ngokomqondo. Kepha ngokuqhubeka kwesikhathi, abantu babona izimpawu ezithile.
Ngokuhlukahluka kwe-ischemic konyawo lwesifo sikashukela, kukhona ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi emilenzeni.
Imvamisa abantu bagubha:
ushintsho kumbala wesikhumba semilenze,
Ubuhlungu lapho uhamba.
Ngokuhlukahluka kwe-neuropathic, izinkinga ezithile zenzeka kaningana kaningi. Kulolu hlobo lwe-pathology, iziphetho zezinzwa ezindaweni ezixineneyo zemilenze ziyathinteka. Isifo sikashukela siyaqonda ukuthi ukuzwela emilenzeni kuyancipha, kwesinye isikhathi ngisho nokuqina okuqinile emilenzeni akuzwakali. I-Flatfoot nayo iyakhula, amathambo aba mancipha, okugcwala ukwelashwa okuhlala isikhathi eside kuma-fractures.
Esikhathini sokuqala, kukhona imifantu ezithendeni, kanye nemikhaza ebandayo. Isiguli kwesinye isikhathi sizwa ukuthi imilenze yakhe ibanda. Ngemuva kwalokho izilonda ze-trophic zivele, bese i-gangrene ikhula ngaphandle kokwelashwa.
Kusukela ekuqaleni kwesifo sikashukela kuya ekushoneni konyawo lwesifo sikashukela, isikhathi esiningi singadlula. Ukupholisa isithende kufanele kwenziwe ngokushesha ngemuva kokutholwa. Uma umuntu onesifo sikashukela engayilandeli imithetho yokudla neyokwelashwa, imiphumela yalesi sifo ingasongela impilo yakhe.
Unyawo lwesifo sikashukela luyinkinga ethinta abanesifo sikashukela abaningi, imbangela eyinhloko yokunqunywa komlenze ngaphandle kokulimala kwangaphandle. Lapho imifantu ivela ezithendeni sikashukela i-mellitus, isimo singaba yingozi enkulu.
Ukujikeleza kwe-Microvascular kukhubazekile kushukela, okusho ukungakwazi komzimba womuntu ukumelana namagciwane.
Isilonda singakheka, futhi uma sishiywa singalashwa, sizovusa isistimu yokuphendula yokuvuvukala.
Izimiso zokwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela
Kunezikhungo ezikhethekile zokwelapha zokwelapha unyawo lwesifo sikashukela. Amakhabethe angasebenza emitholampilo enkulu. Lapho, ungasheshe uthole izeluleko zokuthi ungalapha kanjani unyawo lwesifo sikashukela.
Lapho kungenakwenzeka ukuya ehhovisi elikhethekile, udinga ukuya ku-endocrinologist noma udokotela ohlinzayo. Kubalulekile ukuhambisana ngokuphelele nazo zonke izincomo zikadokotela oholayo. Ngakho-ke, ukwanda kwesimo okuqhubekayo kungavinjelwa.
Udokotela kufanele aboniswane lapho nje unyawo luqala ukuvela ngokuqhekeka noma olunye ushintsho. Ukwelashwa ngonyawo sikashukela, kusetshenziswa izidakamizwa ezinomsebenzi we-antimicrobial ezingenazimpawu zokuthamba. Okokuqala, yile:
Uma ubuzwa ukuthi i-iodine noma utshwala bungasetshenziselwa ukwelashwa, impendulo izohlala ingemihle. Le mikhiqizo ingahle inciphise inqubo yokuphulukisa ngoba iqukethe ama-tanning agents. Ukusetshenziswa kwezingubo zanamuhla ezinganamatheli esilondeni, ngokungafani nebhandishi noma i-gauze, kuyakhonjiswa.
Amanxeba kufanele aphathwe njalo kususwe nezicubu ezingasebenzi. Lezi zinqubo kufanele zenziwe ngudokotela noma umhlengikazi ngokuvama kwesikhathi se-1 ezinsukwini ezi-2-15. Udinga futhi ukuvikela isilonda ngesikhathi sokuvivinya umzimba ngenkathi uhamba. Ngalezi zinhloso, amadivayisi ahlukahlukene asetshenziswa:
ethula amabhu nabanye.
Uma ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi kuba ngumuntu okuvusa iziphazamiso noma izilonda, khona-ke umphumela wokwelashwa kwendawo uzoba mncane uma ukugeleza kwegazi kungabuyiswanga. Kulesi simo, awukwazi ukwenza ngaphandle kokuhlinzwa emithanjeni yemilenze:
ukuhlinzwa okudlula lapho.
Ampingation isetshenziswa cishe ku-15-20% wezimo zesifo sikashukela sikashukela. Kepha, kaningi, lo msebenzi ungavinjelwa uma kuqalwa ukwelashwa okufanele. Kubalulekile ukwenza izindlela zokuvimbela ukuvikela izilonda ezisesiswini esikhulu kakhulu. Uma kwenzeka umonakalo, khona-ke ukwelashwa kufanele kuqale ngokushesha.
Kuyadingeka ukuthola kusengaphambili kusuka ku-endocrinologist ngomsebenzi wehhovisi elikhethekile wonyawo lwesifo sikashukela futhi ubonisane kulesi sikhungo. Ingozi enkulu yokuqunjelwa kungenzeka:
Esimweni lapho i-osteomyelitis ikhula kushukela mellitus - ukwengeza izicubu zamathambo,
isilonda ngemuva kwesithambo se-limb ischemia - ukwephulwa kwegama lokugeleza kwegazi kuye onyaweni.
Nge-osteomyelitis, ukwelashwa konyawo lwesifo sikashukela kungenziwa ngaphandle kokunqunywa. Kufanele udle imishanguzo kwimithamo emikhulu cishe izinyanga ezimbili, kanye nokuhlanganiswa kwemithi ehlukahlukene. Endabeni ye-ischemia ebucayi, umphumela uzovela kunqubo yokuhlinzwa ngemuva - ibhaluni angioplasty. Ukuhlinzwa kwe-vascular bypass nakho kunganqunyelwa.
Imithi elwa nesifo sikashukela ekhombisa bonke abanesifo sikashukela abanamanxeba onyawo athelelekile. Udokotela uyanquma:
indlela kanye nedosi yokuphatha.
Njengomthetho, ukwelashwa okulwisa imithi elwa nemilenze ngesifo sikashukela kubandakanya ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngobubanzi besenzo. Ngaphambi kokuyalela, kufanele unqume uzwela wemithi elwa namagciwane ahlukaniswe izicubu ezithintekile.
Imvamisa, abanesifo sikashukela bathanda ukusebenzisa imithambo yokugcoba. Lokhu akulungile, ngoba okokugcoba, njengokhilimu, kungadala indawo enhle yokwandisa isibalo samagciwane futhi kuphazamise ukuphuma kwe-fluid enxebeni. Amafutha avela onyaweni lwesifo sikashukela awusiyo ikhambi elihle kunonyawo lwesifo sikashukela.
Umphumela omuhle kakhulu uhlinzekwa ngezingubo zamuva zesizukulwane, lezi yizisulu ezinomsebenzi ophakeme kanye nomsebenzi wokubulala izinto. Isiponji se-Collagen sisetshenziselwa futhi ukugcwalisa amanxeba.
Ikhambi elithile, kanye nezindlela ezijwayelekile zokwelashwa, zihlala zikhethwa ngudokotela ohambelayo ngemuva kokufunda ngezimpawu zomuntu ngamunye ze-pathology.
Uma kungekho buhlungu onyaweni lwesifo sikashukela, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Impumelelo yokwelapha incike ekusetshenzisweni okufanelekile kweziphakamiso ze-podologist.
ngaso sonke isikhathi gcina inxeba lihlanzekile
vikela amanzi ukuthi angangeni endaweni ethintekile,
shintsha ukugqoka kwansuku zonke
Sebenzisa ama-painkillers neminye imithi enqunywe udokotela wakho
Ungahambi ngaphandle kwezicathulo
sebenzisa amasokisi kwabanesifo sikashukela,
ukunciphisa ukusebenza komzimba.
Ukwelapha kwesilonda sendawo kufaka phakathi:
Kungcono ukuhlanza isilonda ngesikhumba. Indlela yokuhlanza ihlinzekelwe ukwehlukaniswa kokutheleleka kanye nokutheleleka ngegciwane enxebeni. Ukusetshenziswa kangcono kwemishini yokuhlanza, isilonda kufanele sibe nezicubu ezinempilo.
Ungahlanza isilonda ngosawoti. Leli thuluzi liphinde latshintshwa ngempumelelo nesixazululo sikasawoti esingu-0.9%. Odokotela balule ukugeza nge-3% hydrogen peroxide ukuze ususe ama-bacterius a-pus kanye ne-anaerobic. I-Miramistin ayibangeli ukwehla kwezinga lokuzalwa kabusha, ngokungafani ne-hydrogen peroxide ne-iodine. Izimali ezibhaliwe kufanele zisetshenziswe ngokuhlukile.
Uma lesi sifo sishubile, kunesidingo sokwelashwa okuhlinzwa. Kulokhu, inxeba lihlala limbozwa ngebhandeshi elingabangeli ukulimala lapho lishintsha, futhi elivumela ukuthi umoya udlule.
Kuze kube manje, izinto ezinhle kakhulu zokugqoka zingama-movie avumelekile akhonjiswe izilonda zesifo sikashukela ezingavunyelwe. Azikwazi ukusetshenziswa isikhathi eside. Iziponji ze-Foamy zingasetshenziswa futhi phakathi kwesigaba sokuphulukisa uma kukhishwa umthamo omncane we-exudate.
Ama-hydrogels anqunyelwe kaningi, anomthelela omuhle kwizilonda ezomile ze-necrotic futhiakhombisa umphumela wokuhlanza inxeba. Ithuluzi livusa ukuphulukiswa ngaphandle kokwakheka kwezibazi.
Muva nje, imbobo ye-hydrocolloid iyathola ukuthandwa. Izimali ezinjalo azidingi ukushintshwa njalo futhi zihlukaniswa ngesilinganiso esihle sekhwalithi yenani. Ama-alginates aphulukisa ngempumelelo izilonda ezahlukahlukene ngenani elikhulu le-exudate. Ngemuva kokubopha, kungcono ukugeza isilonda ngosawoti.
Ukwelashwa kwasendaweni ngemithi yesintu kufaka phakathi ukusetshenziswa kwezingubo ngamafutha:
Ngaphambi kokufaka i-bandage, udinga ukuhlanza isilonda ngamafutha okugcoba:
Ziqukethe ama-enzyme e-proteinase ne-collagenase. Lapho amanxeba atheleleka ngenxa yemiphumela enobuthi, izidakamizwa kufanele zinikezwe ngokuqapha, ngoba zithinta nezicubu ezinempilo.
Izilonda ze-purulent, ezihambisana ne-edema enzima, nikeza izidakamizwa eziqukethe iodine ne-polyethylene oxide. Ngaphezu kwalokho, udokotela angakunquma ama-antiseptics anjengalawa:
Ukusetshenziswa kwemali enjalo emilenzeni kudinga ukuthi kuhlolwe isilonda nsuku zonke ngenxa yengozi yokugcwala ngokweqile kobuso besilonda ngesikhathi sokuphola. I-Bepanten iyikhambi lesimanje elisetshenziselwa ukumisa ukuthuthukiswa kwezinkinga.
Ukwelashwa kwemithi yesifo sikashukela sabantu besifo sikashukela nakho kungasetshenziswa. Ukusetshenziswa ngempumelelo kwamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka. Amacembe ayisithupha adinga ukuthululelwa ngengilazi yamanzi ashisayo futhi afakwe amahora ama-2. Thatha i-100 ml ekuseni nakusihlwa.
Unyawo lungafakwa kakhulu luju futhi kufakwa isudioship phezulu. Ngaphambi kokusetshenziswa, isitshalo sithululelwa ngamanzi abilayo. Indawo ethintekile iphathwa ngesixazululo esibuthakathaka se-furatsilina.
Ukwelashwa ngonyawo lwesifo sikashukela ekhaya kungenziwa kusetshenziswa ama-tinctures we-eucalyptus. Kwi-spoon enkulu ye-tincture engafundisiwe udinga ukuthatha inani elilinganayo loju. Ukugqoka kwe-gauze kufakwa engxenyeni bese kufakwa endaweni ethintekile. Futhi, ukwakheka kungasetjenziselwa ukugeza izinyawo. Bayakuvumela ukuba uthambise isithende izithende, uma ugeza njalo.
Ungathambisa ucezu lwezicubu ku-yoghur noma kefir bese unamathisela endaweni ethintekile. I-compress ishintshwa ngokushesha ngemuva kokuna. Ijiniper noma i-spruce izinaliti ezifakiwe zingafakwa emikhiqizweni yobisi ebilisiwe. le ndatshana izokutshela ukuthi wenzeni ngonyawo lwesifo sikashukela.
Ukwelashwa unyawo sikashukela: kanjani nokuthi kufanele ukwelashwa kanjani ekhaya
Unyawo lwesifo sikashukela lungenye yezinkinga sekwephuzile futhi okuyingozi kakhulu sikashukela. Imbangela yokubandakanyeka kukhuphula izinga likashukela egazini.
Inani elikhulu loshukela libangela ukuqina kwemithambo yegazi nokungasebenzi kahle kwezicubu, ngenxa yalokho kunengozi yokutheleleka kwezicubu ngokwakhiwa okulandelayo kwezinqubo ze-purulent-necrotic.
Unyawo lokuxilonga, njengomthetho, aluphathwa ngamakhambi abantu, kepha uma lufakiwe ekwelashweni okuyinkimbinkimbi, ukwelashwa okunjalo kusebenza impela.
Izimiso kanye nokwelashwa ekhaya
Ukwephulwa kwe-trophism kanye nokunikezwa kwegazi okujwayelekile ezicutshini zonyawo kuboniswa yilezi zimpawu ezilandelayo:
izilonda ezincane nezindawo ezi-necrotic ziyavela esikhunjeni, ezibonakala ezicutshini ekujuleni okungafani,
ezinyaweni akukho noma okunciphisile ukuzwela kobuhlungu, lokhu kuwukubonakaliswa kwesifo sikashukela sikashukela,
ukolweni nommbila kwakhiwa ezinsweni, zingashintsha nganoma yisiphi isikhathi zibe yizilonda ze-purulent-necrotic,
umuntu ukhathazekile ngokushiswa, izinhlungu, ukuzindla, umuzwa wokuthi "ama-goose bumps",
Uhlobo lwesikhumba luyashintsha, luphenduka lube mnyama futhi lumbozwe amabala ansundu.
Isifo sikashukela sonyawo sikashukela asikhombisi ngokushesha izimpawu, zonke izinkomba zibonakala kuphela eminyakeni eyi-15 ukuya kwengama-20 emva kokuqala kwesifo sikashukela, futhi lapha kuzodingeka uselaphe ngokushesha futhi ngokushesha. Uma isiguli singabheki amazinga kashukela egazini, khona-ke izimpawu zingavela ekuqaleni, futhi ukwelashwa kuzodingeka ngokushesha.
Ukwelashwa kufanele kuzo zonke izimo kwenziwe ngendlela eyinkimbinkimbi, kuncike ekudleni okuthile nasekusetshenzisweni kwama-insoles we-orthopedic ukunciphisa umthwalo ezinyaweni.
Izindlela zemithi yendabuko ekwelapheni unyawo lwesifo sikashukela zingasebenza kuphela lapho kungekho songo se-gang ganganne futhi asikho isidingo sokuguqukela ekuhlinzeni.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imizamo ezimele yokusebenzisa amakhambi abantu, njengomthetho, iholela ezinkingeni kanye nokuwohloka okujwayelekile kwesimo somuntu; ukwelashwa kufanele kwenziwe ngokuhlanganiswa, ngisho nasekhaya.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngonyawo lweswekile ngezindlela zokupheka zabantu, udinga ukubonana nodokotela kulokhu.
Izimiso ezibalulekile zokusetshenziswa kwama-decoction okwelapha, ama-tinctures namakhambi ekhaya yilezi:
ukusetshenziswa kwamakhambi abantu endaweni, izindlela zokupheka kufanele zibe nokugxila ekuhlanzeni nasekuhlanzeni,
ukusetshenziswa kwezimali zokwelapha namakhambi okunomphumela we-vasodilating,
ukusetshenziswa kwezindlela zokupheka zabantu, okubandakanya imikhiqizo enciphisa igazi futhi ithuthukise i-microcirculation,
ukusetshenziswa kwamakhambi onomphumela wokupholisa inxeba ezinqubweni ze-purulent-necrotic kanye nezilonda ngenhloso yokwelashwa kwendawo.
Ukufingqa, singasho ukuthi izindlela zokupheka zabantu zenzelwe ukuhlehlisa ukwephulwa okufanayo nokwelashwa kwendabuko, kepha ukwelashwa kufanele kucatshangwe futhi kuqashelwe.
Izindlela ezimbalwa eziyisisekelo zokupheka ekhaya
Izindlela zokupheka zemithi yendabuko, ezisetshenziswa kabanzi ekwelapheni unyawo lwesifo sikashukela, zikufakazele kaningi ukusebenza kwazo. Nazi eziphambili:
Ama-Blueberries anekhono elishiwo lokwehlisa ushukela wegazi, athuthukise i-microcirculation futhi asheshise imetabolism. Kunconywa ukungeza izingilazi ezintathu zama-blueberries kumenyu, okudingeka uyidle kathathu ngosuku. Ngaphezu kwamajikijolo, amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka nawo ayenziwa futhi aphuzwe njengetiye kaningana ngosuku.
Ukwelashwa kusikisela ukuthi asetshenziswa amaqabunga e-burdock noma ama-burdock. Ebusika zingasetshenziswa ngefomu elomile, futhi ehlobo - okusha. I-Burdock ne-burdock banomphumela wokuphulukisa. Amaqabunga asetshenziswa esiswini, ngemuva kokugeza umlenze nge-furacilin noma isisombululo se-potanganum permanganate. Ngomphumela omuhle kakhulu, ungagcoba unyawo ngesendlalelo sikaju, sifafazwe ngamahlamvu ama-burdock ngaphezulu.
I-bandage enamaqabunga ishintsha izikhathi ezi-2 ngosuku. Amaqabunga e-burdock futhi asetshenziselwa ukuphathwa komlomo ngesilinganiso se-1 ithisipuni ingilazi yamanzi abilayo. I-Burdock ine-diuretic ne-lymphogonous effect.
Ukwelapha unyawo, kusetshenziswa uwoyela we-clove, othengiswa emakhemisi. Ithuluzi linomphumela we-antibacterial, analgesic kanye nokulimala kwezilonda, lisiza kakhulu ukubelapha ngemiphumela yonyawo lwesifo sikashukela.
Ukusheshisa ukuphulukiswa kwesilonda, i-kefir ingafakwa esikhunjeni sonyawo, esifafazwe nge-powder kusuka ezinalwaneni zomisiwe zejuniper noma zikaphayini. Umphumela wokwelapha walezi zitshalo ungaphezu kokungabaza, lawa ngamavithamini, ama-antioxidants kanye namafutha abalulekile, konke okusheshisa inqubo yokuphulukisa kwezicubu futhi kuzivumele ukuthi zelashwe ngokushesha, into eyinhloko ukuthi i-gangrene yamaphethelo aphansi ayiqali ngesifo sikashukela mellitus.
I-tincture etholwe ngale ndlela ingasebenza njenge-ejenti yokupholisa inxeba enhle yokufaka isicelo se-topical: thatha imbewu yesinaphi, izimbali ze-chamomile kanye namaqabunga e-rosemary ngokwesilinganiso se-2/2/11. Gaya zonke izithako bese uthela uhhafu welitha lamanzi abandayo. I-ketshezi ifakwa cishe amahora ayi-12. Kusetshenziswa isisombululo emithanjeni yoboya bese isetshenziswa enyaweni ubusuku bonke.
Uma ukwelashwa ngezindlela ezihlukile kungalethi imiphumela, kungcono ukubonana nodokotela ngokushesha.
Kuhlala kulula ukuvikela lesi sifo ngokuvikela, lokhu kusebenza ngokuphelele ekuvinjelweni konyawo lwesifo sikashukela. Amathiphu alandelayo azosiza ukuvikela lokhu kwephulwa ukuthi kungenzeki:
Izinyawo kufanele zifudumale njalo, kuyadingeka ukukhipha kungenzeka i-hypothermia.
Ukuhlolwa njalo komlenze nokuphela kwaso kuzokuvumela ukuthi uqaphele amabele noma ukwakheka kwezilonda ngesikhathi.
Kubalulekile ukunakekela izinyawo zakho ngokuhlelekile, uzigeze kahle ngamanzi, kungenzeka usebenzise insipho yokuwasha.
Ukwenqaba imikhuba emibi kuzoba yinhlanganisela ebalulekile ekulweni nalesi sifo.
Akunconywa ukulimaza izicubu ezithambile, udinga ukuzinakekela kahle izipikili zakho, uzisike ngokucophelela futhi ususe i-cuticle.
Ushukela wegazi kufanele ugadwe nsuku zonke.
Isiguli kufanele sigqoke izicathulo ezisebenzayo nezikhululekile kuphela, ezingakwazi ukubangela ukucasuka.
Sebenzisa amakhambi achazwe ngenhla avela ekwelashweni kwemithi yendabuko kuyindlela enhle yokuhlenga impilo ngokuhlelekile lapho kukhona isifo sikashukela, ikakhulukazi esimweni sezimpawu zokuqala zonyawo lwesifo sikashukela, esivezwa ngokulinyazwa kwezicubu ezithambile.